Puntland iyo Galmudug oo heshiis kala saxiixday (Sawiro + Cod) | shumis.net
Home » News » Wararka » Puntland iyo Galmudug oo heshiis kala saxiixday (Sawiro + Cod)
Puntland iyo Galmudug oo heshiis kala saxiixday (Sawiro + Cod)
Garoonka diyaaradaha ee Cabdullaahi Yusuf magaalada Gaalkacyo waxaa ka furmay shir u dhexeeya Puntland iyo Galmudug, shirkan oo ay ka soo shaqeeyeen Dowladda federaalka Soomaaliya maamul goboleedyada iyo Beesha Caalamka ayaa markii u horeysey waxaa isku soo horfariisanaya ergooyin ka kala socda Puntand iyo Galmudug.
Labada ergo waxaa kala hoggaaminayey Madaxweynaha Puntland Prof. Cabdiweli Cali Gaas iyo Madaxweynaha Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed.
Waxaa Banalka ama Miiska wada saaran, raysalwasaaraha Soomaaliya oo dhexda ugu jirey Madaxweynaha Puntland iyo kan Galmudug, waxaana garbaha ka sii fadhiya Madaxweynahayaasha Koonfur Galbeed iyo Jubaland.
Shirka ayaa lagu furey aayadaha qur’aanka kariimka ah, waxaana mikrofoonka lagu soo dhaweeyey raysalwasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid.
Raysalwasaaraha ayaa ka shekeeyey marxladihii ay soo amreen wada hadalkan, waxaana uu nasiib darro ku tilmaamey in Gaalkacyo colaad ka dhacdo iyada oo ahayd magaalo ay u han weynaayeen in ayba noqoto Caasimad Soomaaliyeed.
Raysalwasaaraha ayaa sheegay in waa heshiiney aan la daba dhigi karin LAAKIIN kaas heshiis maaha, waxaana uu labada dhinacba ka codsadey in heshiis rasmi ah la wada galaan.
Qaabka heshiiska ayuu sheegay in uu noqonayo labada Madaxweyne ayaa akhrinaya heshiiska kadibna waa la wada saxiixayaa.
Heshiiska ayaa loogu magacdarey HESHIISKA Gaalkacyo.
Waxaana shirka ka hor akhriyey Wasiirka Arrimaha Gudaha Cabdiraxmaan Odowaa., heshiiska ayaa ka koobnaa afar qofob oo horey loogu heshiiyey:
Labada Madaxweyne ee Puntland iyo Galmudug aya heshiiska wada saxiixey, sidoo kale waxaa saxiixey markhaantiyaashii Heshiiska iyo raysalwasaaraha oo wakiil ka ahaa, waxaana labada dhinac is dhaafsadeen salaam iyo waraaqihii.
Madaxweynaha Puntland iyo kan Galmudug ayaa goobta khudbado kooban ka soo jeediyey madasha hoos ka dhegayso:
Title: Puntland iyo Galmudug oo heshiis kala saxiixday (Sawiro + Cod)
Posted by galmada Net, Published at December 03, 2015 and have 0 comments